Bangiyada waaweyn oo hoos loo dhigay shahaadadooda amaaheed. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bangiyada waaweyn oo hoos loo dhigay shahaadadooda amaaheed.
La daabacay fredag 25 maj 2012 kl 10.57
Labo ka mid ah afarta bangi ee waaweyn dalkaan ayaa waxaa kartidooda amaaheed hoos u dhigay shirkad qaymaysa amaaha bangiyada oo la yiraahdo Moody's. Nordea iyo Handelsbanken ayaa hoos loo dhigay min hal tilaabo halka SEB iyo Swedenbank meeshooda weli joogaan. Bangiga Handelsbanken ayaa sheegay in aysan ka welwelsanay go'aanka shirkado hoos ugu dhigtay quwadooda amaaheed.
- ma ka welwelsanin madaama ay sannadkaan gudihiisa horay noogu digeen taas oon aan wax saamayn ah nagu yeelan, sidoo kale suuqa ´dhaqaalahu asna si sahlan buu u qaatay ayuu yeri Bengt Carlsson oo u qaabilsan saxaafada handelsbankeen mar oo u waramayey Ekot.
- Moody waxay qabtaa in bangiyada Sweden marka loo barbardhigo ku caalamka in ay ku tiirsanyahiin amaahda ay suuqa lacagta ka soo amaahdan taas oo ay macaamiishooda sii deemiyaan, tusaale marka ay macaamiishu guriyo gadanayaan. Halka bangiyada kale ee caalamka ay badanaa haystaan lacag ayagu leeyahiin oo akoonka ugu jirta, taas oo keenayni karta in bangiyada Sweden qatar u galaan in ay dhacaan hadii ay dhaqaalo xumi la soo gudboonaato.
Maka welwelsantahay in hoos u dhiga shahaadada bangiyado keenta dhaqaalo xumo